Wada Hadalkii Somaliland iyo Somalia oo Maanta Si Rasmi ah uga Furmaya London iyo Maxamed Cabdulahi Cumar oo Shaaciyay in ay Guulo Soo Heyn Doonaan.(Hadhwanaagnews) Wednesday, June 20, 2012 London-(HWN)- Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada London ee cariga dalka Ingiriiska uu ka furmo shir udhaxeyo dowladaha London-(HWN)- Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada London ee cariga dalka Ingiriiska uu ka furmo shir udhaxeyo dowladaha Somaliland iyo Somalia kaasi oo noqon doono mid wajiyo badan wata iyadoona aysan jirin in uu shirku yahay mid hal waji ah.
Wafidigii uu horkacayay Wasiirka arimaha Dibada Somaliland Maxamed Cabdulaahi Cumar ayaa waqtigaan kujira diyaar garow iyo sidii ay guulo waa weyn ugu soo hoyn lahaayeen dowlada iyo shacabka reer Somaliland ay wakiilka ka yihiin.
Wafuuda iyana mataleysa dowlada KMG
ah Soomaaliya ayaa shalay ka amba baxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana isla shalay ay gaareen meel aan sidaa ugu fogeyn halka shirka lagu qabanayo maanta.
Wada hadalka Somaliland iyo Somalia ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee labada dhinac dhex mara waana markii ugu horeysa wafdi ka socda dowlda Somaliland ay si gooni ah ula fariisteen kooxaha Somalida .
Wasiirka arimaha dibada Somaliland Maxamed Cabdulaahi Cumar ayaa shaaca ka qaaday in ujeedada shirka ay uga qeyb galayaan ay tahay in ay helaan ictiraaf caalami ah balse aysan shirka ugaleynin in ay ku milmeen maamulada tira badan ee ka jira dalka Soomaalia.
Hadaba shirkaan oo saacadaha soo aadan si toos ah ufurmaya ayaad kala socon doontaan wixii ka soo baxa Shabakada Caalamiga ah ee Hadhwanaagnews